Na -aga n'ụwa niile - AEON Harvest Industry (Hunan) Co., Ltd.
Ịghọta mba ofesi mmepe obodo na netwọk ọrụ anọwo ihe mgbaru ọsọ dị mkpa nke ụlọ ọrụ ahụ.
N'ime iri afọ ole na ole gara aga, anyị arụpụtakwala ọmarịcha ihe. Okwu ikpe anyị na -aga nke ọma dị na United States, Mexico, Brazil, Chile, Australia, New Zealand, Japan, South Korea, Thailand, Vietnam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, India, Pakistan, UAE, Saudi Arabia, Kuwait, South Africa, Russia, karịa mba na mpaghara 30 gụnyere Ukraine, Serbia, Germany, United Kingdom, Spain, na Italy.
Anyị nwere ndị mmekọ na ụlọ ọrụ ọrụ n'ọtụtụ mba na mpaghara, gbakwunyere ndị otu nkwado teknụzụ dị n'ịntanetị tozuru oke iji nye ndị ahịa gburugburu ụwa ọrụ ire ahịa mgbe niile iji hụ na ngwaahịa niile erere n'ahịa mba ofesi nwere ike na-agba ọsọ mgbe niile.
Ihe Ndị Anyị Ji Mara Ya
Ọtụtụ njirimara anyị nwere dị ka ngwaahịa na ọrụ anyị na -aga n'ụwa niile
Ịkwado ọkachamara akpaaka
N'ime ihe karịrị afọ iri atọ na -eto eto na ụlọ ọrụ, anyị achịkọbara ahụmịhe ngwa, ma ọ bụ R&D na imepụta akụrụngwa/ebe ọrụ ịgbado ọkụ akpaaka ma ọ bụ imewe na njikọta nke usoro nrụpụta akpaaka akpaaka ụlọ ọrụ dum. Anyị enyela ọtụtụ ụzọ ịgbado ọkụ akpaaka maka nrụpụta arịa ụgbọ mmiri, nrụpụta igwe na -ewu, imepụta ụgbọ ala, mmepụta semiconductor, akụrụngwa biomedical, akụrụngwa mmanụ, ngwa ikuku, nrụpụta ụgbọ mmiri na ụlọ ọrụ ike nuklia. Karịsịa n'ọkwa ịgbado ọkụ orbital, ịgbado ọkụ robotic na ịgbado ọkụ plasma, anyị nọ n'ọkwá dị elu n'ahịa ndị China.
AS/RS Ụlọ nkwakọ ngwaahịa sistemụ
Sistemụ nkwakọ ngwaahịa lọjistik AS/RS R&D na mmepụta bụ Changsha HUAHENG na -eduzi ya. Ebe nrụpụta kpuchiri mita 30,000, yana ndị ọrụ karịrị 300 na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị injinia R&D 100. Ụlọ ọrụ ahụ nwere ikike ikike ọgụgụ isi 91 na ọrụ ngwanrọ 35 metụtara ụlọ nkwakọba ihe nwere ọgụgụ isi, RGV/AGV, stacker crane, line conveyor, robot, na software WMS. Enwere ike ịhazi sistemụ AS/RS iji jikwaa ụdị ihe ọ bụla, anyị nwekwara ike ịnye akụrụngwa isi ahaziri nke kacha mma maka sistemụ ụfọdụ na ngwaahịa ụfọdụ.
Ogo, arụmọrụ na ọrụ
"Ogo na arụmọrụ bụ ihe nzuzo iji merie okwu ọnụ, na ọrụ ịre ahịa mgbe ọ gasịrị bụ naanị ụzọ isi jigide ndị ahịa." N'ime usoro mmepe azụmaahịa, AEON Harvest na HUAHENG nwere otu echiche na ebumnuche. Ma ọ bụ akụrụngwa ịgbado ọkụ akpaka ma ọ bụ ngwa na sistemụ AS/RS ahaziri iche, ihe mbụ dị anyị mkpa iji hụ bụ ịdị mma na arụmọrụ ngwaahịa a. Ụkpụrụ ndị anyị na-agbaso na-eme ka anyị si n'otu obere ụlọ ọrụ malite gaa ụlọ ọrụ mba ụwa edepụtara.